Samsung Galaxy A02 ayaa rakibi doonta 5.000 mAh baytariga | Androidsis
Samsung Galaxy A02 ayaa rakibi doonta 5.000 mAh baytari
Samsung Galaxy A02 waxay ka hadlaysay bil, qalab heer-gal ah oo sida xaqiiqada ah imaan doona horaanta 2021. Shirkadda South Korea ee xilligan la joogo ayaa meesha ka saareysa ku dhawaaqista terminaal cusub sanadka 2020, in kasta oo aan meesha laga saarin inay soo bandhigeyso xoogaa cusbooneysiin ah mid ka mid ah noocyadeeda la heli karo .
El Galaxy A02 wuxuu noqon doonaa isbedelka caanka ah ee Samsung Galaxy A01, waxaa laga bilaabi doonaa qaar ka mid ah wadamada soo koraya waxaana ka mid ah wadamada qaar sida Hindiya. Telefoonku wuxuu horey u muujiyey qaar ka mid ah faa iidooyinkiisa iyadoo loo marayo Geekbench, oo ah goob mobiillo badani ay soo maraan ka hor inta aan si rasmi ah loo furin.
1 Qeexitaannada ugu horreeya ee Galaxy A02
2 Ayaa imaan lahaa Diisambar
Qeexitaannada ugu horreeya ee Galaxy A02
Dukumiinti ka socota bogga CPQD ayaa muujinaya taas nooca SM-A025M / DS wuxuu qalabeyn doonaa 5.000 mAh batari, oo markaa leh madax-bannaanida wanaagsan ee maalinta oo dhan iyo ku dhowaad labanlaabidda Galaxy A01. Waxaa lagu soo dallacayaa jaangooyo u dhexeeya 15 illaa 18 watts, oo lagama maarmaan u ah in lagu qaado awooddaas hal saac.
Samsung Galaxy A02 wuxuu dhex maray Geekbench oo muujinaya inuu la yimaado 3 GB oo RAM ah iyo processor-ka loo yaqaan 'Snapdragon processor', wuxuu noqon karaa nooca hoose ee dhammaadka ah ee 450. Waxyaabaha kale ee faahfaahinta ah, waxay la imaan doontaa shaashad 5,7-inch HD + ah iyo saddex kamaradood, laba gadaal ah iyo mid hore oo loogu talagalay sawir-qaadista iyo shirarka fiidiyowga.
Kaamirooyinka gadaal waxay u noqon doonaan 13 megapixels aaladda weyn, halka aaladda 2 megapixel sensor ay caawin doonto. Dareemka hore wuxuu noqonayaa 8 megapixels, ku habboon waqtiyada hadda iyo akhristaha faraha ayaa noqon doona nooca gadaal.
Ayaa imaan lahaa Diisambar
El Galaxy A01 waxaa la soo bandhigay bishii Diseembar 2019, sidaa darteed looma diidin in taleefanka sidoo kale lagu dhawaaqi doono bisha Diseembar laakiin sanadkan, sanadka 2020. Taleefoonka waxaa weheliya Samsung Galaxy M02, oo ah nooc cusub oo soo galid ah oo aad ula mid noqon doona Galaxy A01 wuxuuna suuqa ka badali doonaa Galaxy M01.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung Galaxy A02 ayaa rakibi doonta 5.000 mAh baytari
Android Auto, 5ta tabaha ugu fiican
Galaxy S21 wuu ka dhowyahay sidii hore: wuxuu helayaa shahaado cusub